Alahady 14 Aprily 2019. – FJKM
Alahady 14 Aprily 2019.
Niverina nanatrika indray ny vahoaka i Jesoa ka nanao fanoharana hafa ho azy ireo .
1-Matokia fa mamokatra izay afafy ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra .
Diniho ange ny tohin’ny asa natombok’ilay lehilahy lazain’i Jesao aminn’y fanoharana : mamafy-maniry / mitombo-mamokatra-masaka-mijinja. Ny voalohany sy ny farany no anjarany. Asain’i Jesoa matoky tsy msy ahiahy isika (and27) fa Izy no mampamokatra ny asa aainy ataontsika ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra.
2- Kely fa mihalehibe ny fanjakan’ Andriamanitra
Ahoana indray ny amin’ny « voatsinapy ? ». Kely ny fanjakan’ Andriamanitra rehefa tonga eo amin ‘ny olona amin’ny voalohany (and30). Fa rehefa raisintsika dia maniry ka mihalehibe eo amintsika . I Jesoa irery no nanomboka ny asa tany Galilia nefa dia nihanaka nanerana an’i Jodia , eny hatrany an-dafin’ny Jordana aza ny lazany avy eo (3.7,8). Rehefa nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana Izy mba hanafaka ny otantsika dia izany no hahazoantsika mpanota monina sy mialokaloka ao amin’ny fanjakany (and32) .
3-Misedra ny finoan’ny mpianatra i Jesoa
Ny Tenin’i Jesoa no narahina raha nifindra ho eny ampita ny mpianatra. Tsy nanakana ny fisedrana mafy nahazo azy ireo izany (and37) . Kanefa manana hiantorahana sy hamonjy azy ny mpianany , dia i Jesoa (and38) . Tiany hotefena hatanjam-pinoana ianao.